Ny Latabatry Ny Feo Malalaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2017 18:59 GMT
Manana tantara nalaza ratsy i Bebelplatz, ilay kianja ao Berlin any akaikin'ny toerana fanaovana fampisehoana tantara an-tsehatra an'ny fanjakana sy ny Oniversiten'i Humboldt. Telo ambifitopolo taona lasa izay (1933) no nandoroan'ny tanora Nazi, izay natosiky ny Minisitry ny Propagandy Joseph Goebbels, ireo boky teo ho eo amin'ny 20 000 isa teo , anisan'izany ny sanganasan'i i Thomas Mann, Erich Maria Remarque, Heinrich Heine, Karl Marx sy ny an'ny mpanoratra maro hafa.
Omaly, 9 septambra 2006, avotra tamin'ny laza ratsin'ny heloka bevava voalaza etsy ambony i Bebelplatz. Nanasa olona miisa 112 izay nahitana mpahay siansa, mpandraharaha ara-tsosialy, filozofa, mpanoratra, mpanakanto sy mpikatroka avy amin'izao tontolo izao ny Dropping Knowledge (Fizarana Fahalalana) izay fikambanana ONG miorina ao Berlin. Nipetraka manodidina ny latabatra midadasika antsoina hoe ‘Ny Latabatry ny Feo Malalaka’ tao amin'ity kianja manan-tantara ity ireto olona nitondra aingam-panahy ireto izay malaza noho ny famoronany maharitra sy ny fandraisany anjara ara-tsosialy na amin'ny mahaolona. Nandray anjara tamin'ny famaliana fanontaniana miisa 100 izay nofantenana avy amin'ny ‘fanentanana omeo ny fanontanianao’ ary nisokatra ho an'ny vahoaka ankapobeny manerantany izy ireo nanomboka tamin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 6 ora hariva.
Vakio ato ny sisa. Vaovao maro kokoa mikasika ny fanombohana ao amin'ny Deutsche Welle .
Azonao atao ny mijery ny lahatsary tahiry ao amin'ny Living Library . Misy sary ao amin'ny Flickr.